Wararka Maanta: Jimco, Apr 26, 2013-Booliiska Uganda oo shaaciyay inay heleen fariimmo Sheegaya in Al-shabaab ay Qorsheynayo Weerarro ay ka geysato Uganda
Uganda ayaa waxaa Soomaaliya kaga sugan ciidammo ka tirsan AMISOM oo dagaal kula jira Al-shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida, waxaana Al-shabaab ay qaraxyo waaweyn ka fulisay sannadkii 2010 magaalada Kampala kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 76-qof oo daawanayay ciyaaro.
“Waxaan helnay warar sheegaya in kooxda aragagaxisada ah ee Al-shabaab ay qorsheyanayan weerarro ay ka fuliyaan dalalka bariga Afrika, gaar ahaan Uganda,” ayuu tiri afhayeenadda booliiska Uganda, Judith Nabakooba oo shir jaraa’id ku qabtay Kampala.
Al-shabaab ayaa horay ugu hanjabtay inay weerarro ka geysanayso dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo ay sheegeen inay yihiin kuwo ay ugu aargudayso dadka Soomaaliyeed ee ay AMISOM ku dilayso gudaha Soomaaliya.
“Innagoo kaashanaysa hay’ado kale oo ammaan ayaan doonaynaa inaan si dhab ah u xaqiijino warbixinnada nasoo gaaraya,” ayay mar kale tiri Judith oo intaas raacisay. “Waxaan doonaynaa inaan ka hortago inay ka dhacaan dalkeena falalkaas argagaxiso.”
Dalka Uganda ayaa wuxuu ahaa dalkii ugu horreeyay oo ciidammo nabad-ilaalin ah u soo dira Soomaaliya, kuwaasoo yimid Muqdisho sannadkii 2007 xilli ay socdeen dagaallo u dhexeeya ciidamadii Itoobiya ee xilligaas joogay dalka iyo xoogaggii Maxkamadaha Islaamka oo ay Al-shabaab ka mid ahayd.
Ciidamada Uganda iyo kuwo kale ee AMISOM ayaa waxay sannadkii 2011 ka billaabeen Muqdisho dagaallo ay la galeen Al-shabaab iyagoo ka qabsaday dhul ballaaran oo ay horay uga talin jirtay kooxdan xiriirka la leh Al-Qaacida.
Weerarradii ka dhacay Kampala sannadkii 2010 ayaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwii ugu khatarsanaa ee Al-Qaacida ay ka geysato bariga Afrika wixii ka dambeeyay weerarkii safaaradaha Mareykanka ee Nairobi-Kenya iyo Daru-salam-Tanzania lagu qaaday sannadkii 1998.
Toddobaad ka hor ayay Al-shabaab weerar lala yaabay ku qabsaday dhisme ay ku shaqeynayeen hay’adaha garsoorka Soomaaliya Muqdisho ku yaalla, halkaasoo ay ku dhinteen 34-qof oo ay ku jireen garyaqaanno, shacab iyo suxufi ka tirsanaa maxamadda gobolka Banaadir.
Bishii lasoo dhaafay aya sidoo kale Al-shabaab la wareegeen magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasoo muddo sannad ka hor lagala wareegay, waxaana qabsashadooda ay timid markii ay si lama filaan ah uga baxeen ciidamadii Itoobiya iyo kuwii Soomaaliya ee degmadaas ku sugnaa.